Nyi Ma Lay – Page3– Daily Celebrity News & Lifestyle
ယခု ဘဝမှာ လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံ အကြောင်းရင်း (၂) မျိုး
ယခု ဘဝတွင် အကြင်လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံ အကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏ […]
မြန်မာပြည် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဗဟုသုတများ( ဒီလို အချက်အလက်မျိုးစုံ တစ်နေရာထဲမှာ မြင်တွေ့ရတာ ရှားတယ်နော်)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားစေသူ အနော်ရထာမင်း ပထမဆုံးမင်း တကောင်းအဘိရာဇာ မြို့တော် ပုဂံ (အေဒီ ၁၀၄၄) ပထမဆုံး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု ပထမဆုံး သမ္မတ စပ်ရွှေသိုက် ပထမဆုံး အာဇာနည်နေ့ […]
၅နှစ် သားလေး နဲ့ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ဟိုလေးကျော်ခဲ့သူ ပိဋကတ်မောင်ထွန်းကြိုင် အကြောင်း
လွန်ခဲ့သောနှ စ်ပေါင်း ၉ဝ-ကျော်ခန့် ကမြန်မာဗု ဒ္ဓဘာသာေ လာက၌ထူးခြားေ သာသူင ယ်ကလေးတ ဦးပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသ ည်။ သူသည်ဓမ္မ ကထိကမောင် ထွန်းကြိုင်ေ ခါ်ပိဋကတ်မောင် ထွန်းကြိုင်ဖြစ် သည်အသက်၅ -နှစ်ခန့်အရွယ်မျှနှင့်ပင် လူထုပရိသ တ်ရှေ့မောက်၌ တရားဟောပြော […]
ကားမောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် ကားတာယာ ပွင့်ပြီး ဘီးပေါက်လျှင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက် (၆)ချက်
By Nyi Ma LayPosted on November 16, 2021
အဝေးပြေး လမ်း များတွင် ကားတာ ယာ ရုတ်တရက် ပွင့်/ပေါက်ခြင်းသည် ယာဉ် မောင်းများအ တွက် အသက် အန္တရာယ်များဆုံး မတော်တဆဖြ စ်ရပ်များတွင် တစ် ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ HILUX SURF, PRADO, LAND […]
မိမိပြုတဲ့ ကုသိုလ်တွေ Fb..ပေါ် တင်သင့်ပါသလား? ဖတ်ကြည့်နော်
Fb ပေါ် မှတ်တမ်းအဖြစ် တင်သင့်ပါတယ်လို့ပဲ ဖြေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုး ယခင်ကဆို ကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း ကြေးစည်တီးကြပါတယ်။ ကြေးစည်သံကို ကြားရရင် အိမ်နီးနားချင်းတွေက အမျှပေးဝေတာပဲဆိုတာ သိရှိပြီး သာဓုခေါ်ကြတယ်။ ယခုခေတ်မှာတော့ မိမိကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်း Fbပေါ် တင်ကြတာဟာ… […]
ကမ္ဘာ့အညစ်ညမ်းဆုံး မြစ် ၁၀ စင်း စာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အကြီးဆုံးမြစ်
ဧရာဝတီမြ စ်ဟာ အ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ အညစ်ည မ်းဆုံး မြစ် ၁၀ စင်း စာရင်းမှာ ပါဝင် လာတယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံအခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တော ရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာ ဝအပင်များထိန်း […]
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးမိတိုင်း သူ့ကိုပါးရိုက် သတိပေးရန် လူငှားထား တဲ့ အိန္ဒိယ-အမေရိကန်ကပြား သူဌေးတစ်ဦး(ရုပ်သံ)
Pavlok အမည်ရှိ လူအသုံး အဆောင်ပစ္စည်း များရောင်းချသော ကုမ္ပဏီကို တည်ထော င်သူလည်းဖြစ် CEO လည်းဖြစ်သော အိန္ဒိယ-အမေရိကန် ကပြား မန်းနီးဆက်သီ ဆိုသူသည် သူ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဝင်ကြည့်မိသည့် အခါတိုင်း သူ့ပါးကို ရိုက်ရန်အတွက် […]
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ကထိန် ခင်းထိုက်သော ရဟန်း ရဲ့ အင်္ဂါရှစ်ပါး
By Nyi Ma LayPosted on November 16, 2021 November 16, 2021
အင်္ဂါ ရှစ်ပါးဟူသည်…. အဋ္ဌဟင်္ဂေဟိ သမန္နာဂတော ပုဂ္ဂလော ဘဗ္ဗော ကထိနံ အတ္ထရိတုံ ၊ကတမေဟိ အဋ္ဌဟိ အင်္ဂေဟိ သမန္နာဂတော ပုဂ္ဂလော ဘဗ္ဗော ကထိနံ အတ္ထရိတုံ။ပုဗ္ဗကရဏံ ဇာနာတိ ၊ ပစ္စုဒ္ဓါရံ ဇာနာတိ၊အဓိဋ်ဌာနံ […]
စိတ်နောက်(ရူး)သွားတဲ့ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်မှ ဘုရင်တစ်ပါး
ကုန်းဘော င်မင်းဆက် ၈ ဆက်ေြ မာက်မင်းဖြစ်သူ သာယာဝတီမင်း (ခေါ်)ကုန်းဘောင်မင်း(ခေါ်) ရွှေဘိုမင်း မှာ စိတ်ေ နာက်သွားသော မင်း အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ငယ်အမည်မှာ မောင်ခင် ဖြစ်သည်။ နောင်ေ တာ်ဘ ကြီးတော်မင်းကို […]
ကံကော င်းတဲ့မိန်း ကလေး ဆိုတာပိုက်ဆံချ မ်းသာ တဲ့သူနဲ့ တွဲရ တာမျိုးလည်း မဟုတ် ဘူးရုပ်ေ ချာတဲ့သူကို ရည်းစားတော် ရတာမျိုးလ ည်း မဟု တ်ဘူးကို ယ့်ဘေးမှာ ရှိတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်က […]